DOWNLOAD PWDT Zlín Z-43 FS2004 - Rikoooo
downloads 5 739
Pannon nku Design Team
A ụgbọ elu e kere iji FSDS 2.24. N'agbanyeghị nke a, o nwere ike na-enye gị ọtụtụ atụmatụ dị naanị na ụdị kere gmax - gụnyere ike na clickable virtual kokpiiti na zuru ezu ngwá na ụlọ ọkụ. Custom gauges-enye nnọọ ezi uche ịme anwansị nke Z-43, gụnyere checklist usoro.
Warning: Gụọ checklist na-esi n'ụzọ ziri ezi-amalite-elu na ugbo elu (na-enweghị-eji Ctrl + E).
Zlín Z-43 bụ onye ọzọ so n'Òtù Z-40 ezinụlọ emepụta site Moravan Otrokovice. E mere ka a oge a na-eji dochie anya L-40 Metasokol na nkera nke abụọ nke 1960s. Ọ bụ ewu bụ na na ọ na ụzọ, bụ Z-42. Ma ị nwere ike ịhụ ọdịiche dị na mbụ n'anya - 4 nọ ọdụ kokpiiti, ihe siri ike fuselage na gbanwere agbanwe nku udi.
The "anọ na atọ", dị ka ọ na dubbed na ọtụtụ Czech aeroclubs, na-eji maka isi ọzụzụ gụnyere radionavigation, nlegharị anya flights na egwuregwu diri inyinya. Z-43s na-eji maka nkenke-efe efe na-efe efe rally.
Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ katọrọ ya, karịsịa, na okwu nke ime ihe na aku na uba, ọ bụ ihe kasị zuru ebe nile ugbo elu nke a, Atiya na Czech Republic na Slovakia na ọ na-eji nke ma aeroclubs na onwe nwe. (Isi Iyi: https://pwdt.virtualskies.net)
Onye edemede: Pannon nku Design Team
Beechcraft Super King Air 300 St. Maarten ndakpu mmiri Club FS2004